फेरी काठमाण्डौमा कोरोनाको तेस्रो संक्रमित भेटिए ! – Etajakhabar
फेरी काठमाण्डौमा कोरोनाको तेस्रो संक्रमित भेटिए !
काठमाडौं- काठमाडौंमा फेरी एक जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। यो सँगै तीन जनामा संक्रमण देखिएको छ।। राष्ट्रिय प्रयोगशालाको वेभसाइटले संक्रमण देखिएको संख्या ३ उल्लेख गरेको छ। उनको टेकु अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। नेपालमा अहिलेसम्म ६८७ जनाको नमुना परीक्षण गरिएको छ, जसमध्ये ६८४ को रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ ।
सुरुमा चीनबाट आएका एक विद्यार्थीमा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो । उनी उपचारपछि निको भइसकेका छन् । ४ चैतमा फ्रान्सबाट कतारको दोहा हुँदै नेपाल आएकी १९ वर्षीया युवतीमा पनि संक्रमण देखियो । त्यसलगतै सरकारले लकडाउनको घोषणा गरेको थियो । एक जना संक्रमित भने उपचार पछि घर फर्किसकेका छन्।
त्यस्तै नेपाल प्रहरीले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएकी नेपाली युवतीसँगै कतार एअरवेजको विमानमा दोहाबाट नेपाल यात्रा गर्ने अन्य १२५ जना नेपालीको ठेगाना पत्ता लागेको बताएको छ। प्रहरीले देशका विभिन्न भागमा रहेका उनीहरूलाई स्वास्थ्य जाँच र क्वारन्टीनजस्ता थप सतर्कता अपनाउन आफूले मतहतका निकायलाई पत्राचार गरेको जनाएको छ।
Posted on: Wednesday, March 25, 2020 Time: 12:42:13
-16604 second ago
-15889 second ago
-14418 second ago
-10210 second ago
-6820 second ago
-5918 second ago